3D yakakomberedzwa Welded Mesh Fence Panel Triangle Welded Fe ...
Australia Yenguva pfupi fenzi Yenguva Diki Fenzi Australia ...
Chain chinongedzo pajira riya cheni chinongedzo fenzi yedhaimani waya pajira riya ...
yakawedzera simbi pajira riya yakawedzera mesh yakawedzera waya pajira riya ...
Razor waya Concertina reza mhete waya Concertina w ...
Welded waya pajira riya kwakakurudzira welded waya pajira riya Panel W ...
hexagonal mambure huku huku purazi mambure
Kwakakurudzira yemichindwe waya PVC zvemapuranga yakarukwa waya Double ...
Kwakakurudzira simbi waya kwakakurudzira tichisunga waya galvani ...
Stainless simbi waya pajira riya Stainless simbi pajira riya dzakarukwa ...
Welded waya pajira riya kwakakurudzira welded waya pajira riya panel pane welded pajira riya panel kongiri netting
Welded waya pajira riya rakagadzirwa yemhando yepamusoro simbi waya kuburikidza otomatiki maitiro uye epamusoro nzira yekutenderera nzira, yakaiswa yakatwasuka uye yakatwasuka, yega yakasunganidzwa pamharadzano dzese. Inoshandiswa zvakanyanya mumaindasitiri nekurima, kuvaka, kutakura uye kuchera zvicherwa zvakadai sehuku dzinochengeterwa huku, mabhasikiti emazai, nhandare dzemumigwagwa, kudhiraina rack, michero yekuomesa michero, fenzi…
Welded Mesh Panel Nhema / kwakakurudzira Welded Wire Mesh Panel Welded Panel Simbi Welded Mesh Panel Concrete mambure Kusimbisa Mesh Yasimbiswa Mesh Concrete simbi pajira riya
Welded waya pajira riya jira (kongiri mambure) yakaitwa yemhando yepamusoro simbi waya uye isina simbi waya kuburikidza otomatiki maitiro uye epamusoro nzira yekumhanyisa nzira, yakaiswa yakatwasuka uye yakatwasuka, yega yakasungwa panosangana pese. kuchengetedza, kurima, njanji, mataira esiringi, mapurani uye mapatitoni masystem.
Hexagonal waya pajira riya inozivikanwawo sehuku yehuku, huku yekukomba, yakakomberedzwa waya pajira riya uye hex waya pajira riya.It rakarukwa newaya waya, yakaderera kabhoni simbi waya kana isina simbi waya, ipapo kwakakurudzira. Kune maviri masitaera eakakurudzira: electro kwakakurudzira (kutonhora kwakakurudzira) uye kupisa kwakanyudzwa kwakakurudzira. Lightweight kwakakurudzira waya pajira riya inogona kushandiswa yehuku waya, tsuro fenzi, rockfall mambure uye stucco pajira riya, heavyweight waya pajira riya inoshandiswa gabion tswanda kana gabionbhokisi. Kwakakurudzira huku yewaya kuitatakananga ngura, ngura uye oxidation kuramba zvakanaka, saka inozivikanwa pakati pevatengi.
Chain chinongedzo mesh cheni chinongedzo wedhaimondi waya mesh bindu fenzi nhabvu munda fenzi
Chain chinongedzo fenzi inonziwo madhaimani waya mesh nekuvhurwa kwedhaimani. Iyo inogadzirwa nematare esimbi akasiyana siyana achiruka necheni yekubatanidzawaya pajira riya muchina. Yedu ketani yekubatanidzapajira riya zvinhu zvinowanikwa mune isina simbi, kwakakurudzira uye PVC yakavharwa waya. Ivo anowanzo shandiswa muminda, yemitambo yadhi, maindasitiri nzvimbo, dzimba, migwagwa uye zviitiko zvekutonga kwevanhu.
yakawedzera simbi pajira riya yakawedzera waya
Kwakakurudzira rakawedzerwa simbi pajira riya, kwakakurudzira wedzera waya pajira riya, aruminiyamu rakawedzera pajira riya Diamond sandara jira
crimped waya pajira riya kuchera crimped pajira riya Mheni sieving mesh Vibrating Mesh Wire yakagwinhwa Screen Ming rakarukwa chinovhara pajira riya
Crimped pajira riya kunogona dzakarukwa zvinhu carbon kabhoni uye Stainless simbi, tine mijenya Stainless simbi zvinhu kuti sarudzo yako, akadai: S.S304, S.S316, S.S316L, S.S904L etc. Iyo ptsvina dzakapfava kwazvo, hapana waya inotsvedza, hapana waya yakatsemuka.
3D Yakakomberedzwa Welded Mesh Fence Panel Triangle Welded Fence 3D yakakomberedzwa Bindu Fence bening fenzi pani waya welded waya pajira riya fenzi pani
Triangle Welded Fence chakagadzirwa munyoro simbi waya, mushure waya kudhirowa, waya nomoto, Panel vachikotama, Panel galvanizing uye Panel PVC unhani, ipapo kuva mukuru strengh fenzi Panel. Yakanaka anti-ngura. 3D yakakomberedzwa Bindu Fence zvakare inonzi bening fenzi pani, welded waya pajira riya fenzi pani, nezvimwe.
Alkali nemishonga varinamire Washington City Offices Mesh Building Reinforcement Washington City Offices Net Washington City Offices Mesh Washington City Offices varinamatira pajira riya alkali nemishonga Washington City Offices pajira riya
Washington City Offices Mesh Inonyanya Alkali nemishonga Washington City Offices Mucheka, Zvinonzi Yakagadzirwa Of The C Kana E Glass Fiber rwebhuruu (chikuru Ingredient iri ASilicate, Good Chemical Kugadzikana) Kuburikidza A Special Weaving Technique, Ipapo Coated By The Antalkali Uye Reinforcing Agent Uye Treated By High Temperature Heat Kupedza. Zviri Yakanaka Injiniya Zvinhu Mukuvaka Uye Kushongedza.
Stainless simbi waya pajira riya isina simbi pajira riya rakarukwa mhando
1.Stainless simbi pajira riya zvinhu: AISI302, 304,304L, 316,316L, 430,309,310S
2.wire Dhayamita: 0.015-5.00 mm
3. weave marudzi: Plain Weave, Twill Weave, Dutch Weave, Reverse Dutch Weave Type.
kwakakurudzira simbi zvipembenene chinovhara kwakakurudzira hwindo chidzitiro kwakakurudzira simbi hwindo chidzitiro kwakakurudzira mosquito mambure kuchengeteka chidzitiro
Kwakakurudzira zvipembenene chidzitiro inonziwo kwakakurudzira hwindo chidzitiro, kwakakurudzira simbi hwindo chidzitiro, kwakakurudzira mosquito mambure. Iyo ndeimwe yemhando dzakakurumbira uye dzakanyanya mari dzezvipembenene skrini. Mashoko acho kwakakurudzira zvipembenene chidzitiro pajira riya yakaderera kabhoni simbi ine baniwe kuruka uye inogona kwakakurudzira chena kana bhuruu usati waruka kana mushure mekuruka.
Kuwedzera kune isina simbi chengetedzo skrini, 11 mesh kwakakurudzira simbi chengetedzo skrini yakaitwa kubva kunopisa yakanyikwa yakakwira tensile kwakakurudzira simbi waya uye nhema simba yakavharwa ndechimwe chakasimba uye chakasimba chengetedzo chidzitiro chemahwindo nemikova. Mhando iyi dzakarukwa kwakakurudzira pajira riya kwakakurumbira Australia musika. Zvichienzaniswa Stainless simbi pajira riya, kwakakurudzira simbi pajira riya kunowedzera Economic uye Higher simba.
Aluminium insect screen aluminium waya mesh aluminium hwindo skrini Aluminium Alloy Chipembenene Screen Mesh
Aluminium windows hwindo rakarukwa nealuminium magnesium alloy waya, inonziwo "aluminium screen", "aluminium insect windows screen", "epoxy yakavharwa aluminium mesh" .Aluminium kubhururuka sikirini isirivha chena ruvara, ngura kuramba, yakakodzera nzvimbo ine hunyoro. Aluminium mosquito skrini inogona kupendwa ne epoxy kupfeka pane akasiyana mavara, senge nhema, girini, sirivheri grey, yero, bhuruu zvichingodaro, saka inonziwo "iyo epoxy coating aluminium skrini". Yedu aluminium alloy screen mesh yakapasa iyo GB / T 10125 bvunzo bvunzo uye munyu pfapfaidzo bvunzo, saka ine yakanaka yakakwana ngura kuramba kuti ishandiswe hwindo kubhuroka sikirini kana chengetedzo skrini munzvimbo ine nyoro kana imwe yakaoma mamiriro.
Stainless simbi umhutu mambure Stainless simbi hwindo sikirini pajira riya Stainless simbi Stainless simbi tupukanana screensecurity hwindo screen
Stainless simbi hwindo chidzitiro inonziwo isina simbi zvipembenene chidzitiro, chengetedzo hwindo skrini. Yakagadzirwa yemhando yepamusoro yesimbi isina waya waya nekusimba uye kuita kusingaperi. Simbi isina waya waya pajira inogona kuramba ngura, ngura, kupisa, alkaline, saka inogona kushandiswa munzvimbo dzakaomarara dzemahwindo, madhoo nemavharanda skrini kudzivirira zvipembenene.